14-ka kulan ee ugu wanaagsan ee xiisaha badan ee Android | Androidsis
14-ta kulan ee ugu fiican tacaburka ee Android
Ignacio Sala | 07/06/2021 18:00 | Ciyaaraha Android
Riwaayado jaantus ah ayaa daqiiqaddiisii ​​sharafta lahaa dhammaadkii 80naadkii iyo 90-meeyadii oo dhan. Haddii sannado badan kugu adkaato, waxay u badan tahay inaad ka ciyaartay qaar ka mid ah cinwaannada astaamaha xilligan sida sagas Jasiiradda Daanyeerka, Indiana Jones, Larry, King Quest ...
Nooca noocan ah ee fiidiyowga fiidiyowga ayaa dib loo soo nooleeyay sanadihii la soo dhaafay iyadoo la adeegsanayo aaladaha mobilada, aalado noo oggolaanaya inaan si fudud ugu raaxeysanno mahadsanid shaashadda taabashada. Haddii aad dooneysay inaad ku soo noqotid noocyadan xoogaa, markaa waan ku tusi doonaa riwaayadaha garaafyada ugu fiican ee Android.
Ciyaaraha xiisaha leh waxay u xuubsiibteen inay noqdaan nooc halka maahan inaan la falgalno jilayaal kale oo ku saleysan wadahadalTaabadalkeed, waa inaan si joogto ah ula macaamilnaa deegaankeena si aan horay ugu socono.
1 Simoon Saaxir
2 Waqtiyada firaaqada ah Larry: Dib ayaa loo soo rogay
9 Frostrune The
11 Qaylada mashiinka
12 Qalcadda Madoow
13 Machine caan
Simon Saaxirka, mid kale oo ka mid ah cinwaannada lahaa xilligiisii ​​ammaan ee 90-meeyadii, ayaa loo heli karaa aaladaha Android ee leh interface isku mid ah oo na tusay cinwaanka asalka ah, sidaa darteed haddii aad runtii rabto inaad ku ciyaarto noocyadan cinwaannada caadiga ah, waa inaad ku bilaabataa midkan.
Cinwaankani wuxuu dib u cusbooneysiiyay muusikada, iyo sidoo kale astaamaha iyo animations, waxaa ku jira nidaamka caadiga ah ee rarka iyo keydinta ciyaaraha. Qoraallada ciyaarta waxaa lagu tarjumay Isbaanish, laakiin ma aha codadka laga helo kaliya Ingiriisiga iyo Jarmalka. Simon the Sixiroolaha waxaa lagu heli karaa 4,59 yuuro oo ku yaal Play Store.
Waqtiyada firaaqada ah Larry: Dib ayaa loo soo rogay
Larry Laffer waa halyeeyga sheekadeena, waa guuldareyste in ka badan 40 sano oo himilada kaliya ay tahay bikradnimadaada lumiso oo hel jacayl dhab ah. Noocaan dib loo cusbooneysiiyey wuxuu hayaa wada hadal la mid ah kii asalka ahaa ee la sii daayay 1987, iyadoo kaftan qatar leh had iyo jeer la xiriirto galmada.
Dhamaan sawirada waxay kujiraan HD waxaana lasocda hees codad leh oo soo jiidasho leh oo uu abuuray Grammy magacaabista Austin Wintory. Dib-u-habeynta cinwaankan waxaa suurto galiyay mashruuc iyada oo loo marayo Kickstarter, Halkaasoo in kabadan 14.000 oo taageerayaal ah ay go’aansadeen inay ahayd waqtigii lagu raaxeysan lahaa markale Larry Laffer.
Ciyaartan, sida dhammaan cinwaanadii hore ee suuqa ku dhacay 90-meeyadii, Waxaa loogu talagalay dadka ka weyn 18 sano jir, waxyaabaha galmada ka kooban. Waxaa loo heli karaa soo degsasho bilaash ah waxaana ku jira wax soo iibsiga gudaha si loo furo marinka cinwaanka oo dhan.
Developer: Ciyaaraha ku celiska
Gadaasha Thimbleweed Park waxaan ku kulmi doonnaa Ron Gilbert iyo Gary Winnick, abuurayaashii Daanyeerka Daanyeerka iyo taxanaha Maniac Mansion, sheeko ku taal 1987 halkaas oo aan ku hayno 5 jilaayaal kuwaas oo ay tahay inaan xallino xujooyinka kala duwan iyo qorshooyinka si aan u helno sababta keentay inay isugu yimaadaan Timblewwed Park, oo ah magaalo ay ku nool yihiin 80 waalli iyo midba mar buundada hoosteeda.
Iyada oo interface-dhibic-iyo-guji, waxaan ka heli mid ka mid ah dhaxalka dabiiciga ah ee Daanyeerka Jasiiradda, oo leh wada hadalo qosol badan oo aan macquul ahayn. Thimbleweed Park waxaa laga heli karaa Play Store-ka 9,99 euro. Waxaa sidoo kale laga heli karaa Google Play Pass.
Developer: Toybox argagax leh, Inc.
Mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu horreeyay ee garaafid ah ee ku yimid aaladaha moobaylka wuxuu ahaa Machinarium, ciyaar in ka badan toban sano suuqa ku jirtay iyo in kasta oo ay da 'weyn tahay, haddana waa lagu raaxaystaa. Machinarium waa ciyaar leh bilicsanaanta uumiga meesha aan isku dhejinno kabaha Josef, aalado sidaas ah waa inaan ka caawinaa sidii uu ku heli lahaa saaxiibtiis.
Machinarium waxaa lagu qiimeeyaa 4,99 euro oo loo yaqaan 'Play Stor'iyo. Xayeysiin bilaash ah ayaa sidoo kale la heli karaa sidaa darteed waan fiirin karnaa kahor intaanan iibsan cinwaanka buuxa.
Isla abuurayaasha sida Machinarium, waxaan ka helnay taxanaha Samorost, taxane ka kooban 3 cinwaan. Si ka duwan Machinarium, Samorost waxaan iska dhigeynaa kabaha gnome kaas oo u adeegsada biibiilaha sixirka ku dhex safri booska adigoo raadinaya asalka qalabkaaga.
Samorost, cinwaanka asalka ah ayaa lagu heli karaa si bilaash ah. Samorost 2 waxaa lagu qiimeeyaa 2,99 euro halka cinwaankii ugu dambeeyay, Samorost 3, lagu qiimeeyay 4,99 euro. Cinwaankan ugu dambeeya, waxaan sidoo kale haysannaa nooc demo ah oo gebi ahaanba bilaash ah oo la heli karo.
Labada Samorost 2 iyo Samorost 3 waa la heli karaa iyada oo loo marayo Google Pay Pass.
Mar labaad, waa inaan ka hadalnaa isla soo-saaraha Machinarium iyo Samorost (Naqshadaynta Amanite). Cinwaankan kaftanka ah, waxaan iska dhigeynaa kabaha 5 noole Ujeedo ah inaad badbaadiso abuurka ugu dambeeya ee geedkaaga inta ay waxyeeleynayso dulinleyda sharka ah.
Botanicula waxaa laga heli karaa Play Store-ka 4,99 euro. Nasiib darrose, ma jiro nooc demo ah oo cinwaankan lagu tijaabinayo. Si kastaba ha noqotee, haddii aan isku daynay cinwaannada kale ee sidoo kale laga heli karo horumariye, waxaan hubin karnaa inaan ka dambeyno xiise kale oo muuqaal ah. Waxaa sidoo kale laga heli karaa Google Pay Pass.
Limbo wuxuu ina gelinayaa kabaha canugga kaasoo ka kac kaynta cadaabta. Hawsha kaliya ee uu hayaa waa inuu helo walaashiis lumisay. Intii uu ku socday, waa inuu ka fogaadaa dhammaan astaamaha dabiiciga ah ee kaynta ku jira.
Cinwaankani wuxuu soo bandhigayaa bilic muuqaal ah oo taxaddar leh codadka monochrome oo cinwaankan badankiis waxaa lagu dejiyey madow iyo caddaan. Limbo waxaa lagu qiimeeyaa € 4,99 oo ku yaal Play Store waxaana sidoo kale laga heli karaa Google Pay Pass.
Badland waa ciyaar madal ah oo ina tusaysa sheekada mid ka mid ah noolaha ku nool kaynta ka buuxan geedaha, ubaxyada iyo noolaha noocyadiisa kala duwan oo u muuqda in laga soo qaatay sheeko xariir. Halyeeygeena waa inuu ogaadaa waxa dhacaya isagoo iska ilaalinaya dabinada iyo carqaladaha jidkiisa la dhigay.
Badland waxaa loo heli karaa in laga soo dejisto bilaash waxaana ku jira wax ku iibsashada iyo xayeysiimaha gudaha ku jira.
Frostrune wuxuu inoo sheegayaa sheekada markab ku burburay duufaan xagaaga ah. Halyeeyga sheekadeena wuxuu ku soo toosay jasiirad, halkaas oo uu ka helayo degsiimo cidla ah oo leh dadkii deganaa way argagaxeen. Hareeraheeda waa kayn mugdi ah oo cufan leh oo ay ka buuxaan burburka qadiimiga ah iyo tuulmooyin aaska oo ay ka buuxaan siro badan oo naga caawin doona inaan xallino qarsoodiga jasiiradda
Cinwaankan ayaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash oo aanu ku jirin nooc kasta oo wax iibsi ama xayeysiis ah.
Developer: Ciyaaraha Snow Cannon
Tormentum waxay bilaabmaysaa marka jilaayaashu ay toosaan iyagoo ku xidhan qafis bir ah, kuna xidhan silsilad a mashiin weyn oo duulaya oo aan la garanayn jihada uu u socdo. Xusuusta kaliya ee dabeecadeena waa muuqaal cakiran oo buur dusheeda ah oo ah farshaxan u taagan hawdka aadanaha oo leh gacmo kor.
Cinwaankan oo dhan, waxaan ka heli 75 sawir gacmeed oo loo qaybiyay 3 gobol oo leh abuur iyo dhisme kala duwan. Markay socoto, waa inaan xallino 24 xujo. Marka lagu daro ciyaarta iyo sheekada asalka ah, ciyaartan waxay u taagan tahay gaar ahaan heesaha wanaagsan ee ka kooban 40 raad.
Tormentum waxaa laga heli karaa Play Store-ka ilaa 5,49 euro, inkasta oo aan soo dejisan karno demo bilaash ah si aan u eegno haddii waxa ay na siiso ay u qalanto qiimaheeda. Waxaa sidoo kale laga heli karaa Google Play Pass.
Tormentum - Murugo Madoow - Meel qarsoodi ah & Guji
Developer: Ohno istuudiyaha
Wareegtada Mashiinka ayaa na gelinaya kabaha Vera, wakiil khaas ah oo leh kobcinta cybernetic oo loo xilsaaray inay baaraan taxane dilal arxan darro ah oo lagu qariyo run xun. Vera waxay ogaan doontaa sida dambiyadan ay ula xiriiraan koox xagjir ah oo ka shaqeynaya sidii loo abuuri lahaa caqli sare oo caqli badan, inkastoo xaqiiqda ay tahay in dhaqankani mamnuuc yahay.
Wareegyada Mashiinka waxaa laga heli karaa Play Store-ka oo ah 5,49 euro. Waxaa laga heli karaa Google Play Pass.
Developer: Cadho kulul
Castle Darkestville waa mid kale quudhin leh interface la mid ah Simon the Sorceres nooca-iyo-guji. Cinwaankani wuxuu ina gelinayaa kabaha Cid, jinka Darkestville, qof bilaa daryeel ah oo mugdi ah oo arki doona dhaqankiisa xun ee ay burburiyeen Romero Brothers, koox ugaarsato ah oo ay shaqaaleeyeen cadowgiisa soo jireenka ah ee Dan Teapot.
Abuureyaasha cinwaankan waxay sheeganayaan in sheekadani ay tahay mid lagu amaanayo hal-abuurnimada garaafka ee 90-meeyadii, halkaas oo wada-hadallada iyo xaaladaha majaajiladu ahaayeen kuwa ugu badan. Qalcadda Darkestville Waxaa laga heli karaa Play Store-ka illaa 2,99 euro waxayna na siineysaa in ka badan 7 saac oo xiiso leh.
Cinwaankani wuxuu ina gelinayaa kabaha Kelvin, kaaliyaha cilmi-baarista ee Dr. Edwin oo ku saabsan hal-saac iyo saacad. Dr. Edwin waa fiisikiste aan dhadhan lahayn oo aada berserk markii uunka ugu dambeeyay, mashiin waqti, waxaa ku jeesjeesaya bulshada cilmiga leh. Si aad calaamadda ugu yeelatid taariikhda, isticmaal mashiinka waqtiga si halyeeyada ugu waawayn taariikhda ay u dhammaystiraan sahamintooda oo ay ula jaan qaadaan.
Ludwig van Beethoven, Isaac Newton, iyo Leonardo da Vinci ayaa ka mid ah halyeeyada lagu soo qaatay sheekadan cajiibka ah ee ku saabsan safarka waqtiga. Mashiinka Sumcaddu waa waxaa laga heli karaa Play Store-ka oo ah 2,99 euro. Waxaa laga heli karaa Google Play Pass.
Rabshad iyo jahwareer 2 waa laba ciyaar oo 2D argagax nafsi ah, Halkaas oo aan iska dhigeyno kabaha Qiimaha, kaasoo ka iibiyay dadnimadiisa inuu ka shaqeeyo shirkad hoggaamineysa. Labada qayboodba waa isku mid, sidaa darteed waxaa la doorbidaa in laga bilaabo tan hore.
Labada cinwaanba waxaa ka buuxa majaajillo madow, 2D garaafyada dhinaca ah, dhawaqa jawiga jawiga oo kaliya sida dhawaaqiisa. Distrant waxaa loo heli karaa 4,59 euro iyo sidoo kale Google Play Pass. Waxaan sidoo kale haysannaa nooc bilaash ah oo aan ku tijaabinno. Distraint 2, waxaa lagu heli karaa 7,49 euro, laakiin ma ahan Google Play Pass.
BARNAAMIJKA: Baqdinta Pixel Horror
BARNAAMIJKA: Daabacaadda daabacaadda
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » 14-ta kulan ee ugu fiican tacaburka ee Android
10-ta barnaamij ee ugufiican si looga fogaado qashinka cuntada
14 barnaamijyo toosh oo bilaash ah oo loogu talagalay Android